Isikhululo soMbane iValves Factory, abaxhasi - China Isikhululo soMbane iValves Abavelisi
Uhlobo lweeNkcukacha: Imodeli yenyukliya yokuqhekeza i-valve Model: ZKPHF41F-150 150Lb, ZKPHF21F-300 300Lb Ububanzi begama: I-DN 20-50 Imveliso isetyenziselwa iyunithi ye-AP1000 njengesixhobo esibi sokutsala uxinzelelo ukuthintela uxinzelelo lwayo olusezantsi kakhulu ekonakaliseni izixhobo. 1.Ngohlobo lwentwasahlobo yohlobo lwe-vacuum decompression, i-valve yokuqhekeza inkunkuma inexinzelelo olulula kunye nokulungiswa kunye nokufakelwa okufanelekileyo. Ivelufa yenzelwe ngokwenqanaba loxinzelelo kunye noxinzelelo loyilo ...
I-M60A yokuqhekeza ivelufa
Uhlobo lweeNkcukacha: Imodeli yenyukliya yokuqhekeza i-valve Model: JNDX100-150P 150Lb Ububanzi obuchanekileyo: I-DN 100-250 Isetyenziselwe ukuhambisa inkqubo yesikhululo samandla senyukliya, inesiphumo esibi soxinzelelo, ukukhutshwa koxinzelelo kunye nokuthintela ukuvuza okungamanzi .1. Ukuqhekeka kwesivalo, ivelufa ezenzekelayo, ayifuni kuqhuba xa usenziwa ukuba usebenze. Kwimeko yesiqhelo yokusebenza, amandla edibeneyo entwasahlobo kunye naphakathi okunyanzeliswa kwivelufa yediski icinezela i-valve d ...
Amaqondo obushushu noxinzelelo ukunciphisa ivalve ngokudlula koxinzelelo oluphantsi
Iinkcukacha Uhlobo loxinzelelo lokunciphisa iModeli yeValve Y966Y-P5545V, Y966Y-P54.550V, Y966Y-P54.535V, Y966Y-P54.530V Igama lesilinganiselo Ububanzi DN 200-450 Ngemo yokusebenza kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo olukhulu kunye nokwahluka kobushushu, yamkela izinto ezininzi Umkhono wenyathelo lokunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo lwangemva kokuvula umlomo wombhobho wokutshiza amanzi kunye nokunciphisa ubushushu ukuqinisekisa ubushushu kunye nefuthe lokunciphisa uxinzelelo. Izinto eziluncedo Valve yi emboxo isakhiwo ...
Ubushushu kunye noxinzelelo ukunciphisa ivalve koxinzelelo oluphezulu lokudlula ngokudlula
Iinkcukacha Uhlobo loxinzelelo Ukunciphisa iValve Model Y966Y-P54.5140V, Y966Y-P55190V Igama Ububanzi Igama DN 125-275 Inemeko yokusebenza lobushushu eliphezulu kunye noxinzelelo olukhulu kunye umahluko lobushushu. Isebenzisa umkhono wamanyathelo ngamanqanaba okunciphisa uxinzelelo kunye nokutshiza amanzi atomization ukutshiza kobushushu ukunciphisa ubushushu kunye nokunciphisa uxinzelelo. Izinto eziluncedo Ivelufa sisakhiwo esingumda kunye nokuhamba okuphakathi kokuhamba kukuhamba ...
Uxinzelelo lokunciphisa ivalve yesosi yokuvuthuza yokunciphisa isikhululo somoya pre-heater
Iinkcukacha Uhlobo loxinzelelo lokunciphisa iValve Model Y666Y-P55 80Ⅰ, Y666Y-1500LB Ububanzi obuchanekileyo Ububanzi be-DN 100 Isot evuthela ukunciphisa i-valve ye-600 ukuya kwi-1,000MW yokuphambanisa umoya (i-ultra-supercritical) pre-heater yomoya ithatha ubushushu obuphezulu bokufudumeza umphunga njengomthombo womoya ovuthuzayo. Uxinzelelo luyacuthwa yivelufa yolawulo yesosi yokuvuthisa isikhululo kwaye ibonelelwe ngebot blower njengomthombo ovuthuza umthombo womoya. Izinto eziluncedo Umzimba wevalufa wamkela i-welding stru ...
Uxinzelelo lokunciphisa ivalve yesosi yokunciphisa isikhululo
Iinkcukacha Uhlobo loxinzelelo lokunciphisa iModeli yeValve Y669Y-P58280V, Y669Y-3000SPL Ububanzi begama le-DN 80 Isetyenziselwa inkqubo yokuvuthela i-soot ye-600 ukuya kwi-1,000MW yokujonga ngamandla (i-ultra-supercritical) iyunithi yebhoyila yamandla ashushu. Izinto eziluncedo Umzimba wevalufa wamkela i-angular isakhiwo sentsimbi ebunjiweyo ngamandla aphezulu kunye nolwalathiso lokuhamba okuphakathi luhlobo lokuvula ukuhamba ukuhlangabezana neemfuno zamandla phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo. Inayo iwelding yombhobho. Ivalve s ...
Isitshizi samanzi esilawula ivelufa yokuhamba koxinzelelo oluphezulu
Iinkcukacha Uhlobo loLawulo lweModeli yeValve T761Y-2500LB, T761Y-420 Ububanzi begama le-DN 100-150 Lilawula ubushushu ekunciphiseni ukuhamba kobushushu kunye noxinzelelo lokunciphisa ivalve yoxinzelelo oluphezulu lwe-turbine yomphunga. Kwimeko yokusebenza koxinzelelo oluphezulu kunye nolwahluko omkhulu woxinzelelo, isebenzisa imo enamanyathelo okuthambisa ukuthintela ukwenzeka kwe-cavitation kunye ne-flash evaporation. Izinto eziluncedo Ivelufa sisakhiwo esingumda kunye nokuhamba okuphakathi ...
Ukulawula ivalve ngokudlula kwamanzi
Iinkcukacha Uhlobo loLawulo lweValve Model T668Y-4500LB, T668Y-500, T668Y-630 Ububanzi obuchaziweyo Ububanzi be-DN 300-400 Isetyenziselwa umbhobho wokuhambisa amanzi ophambili we-1,000MW supercritical (ultra-supercritical) unit boiler yokulawula ukuhamba kwamanzi. Izinto eziluncedo Ivaluva luhlobo lolwakhiwo oluchanekileyo, indlela yokuhamba okuphakathi luhlobo lokuhamba kunye nokutywina umphezulu wesihlalo sevalve kukude kwinqanaba lokugqibela lomphunga ukuze uqinisekise ubomi benkonzo. Umzimba wevalufa ...
Engxamisekileyo idreyini yolawulo lokuhambisa amanzi ngesifudumezi soxinzelelo oluphezulu
Inkcukacha Uhlobo lweSave Valve Model Z964Y Uxinzelelo lwe-PN20-50MPa 1500LB-2500LB Isilinganiselo seDayameter DN 300-500 Isetyenziswa njengokuvula kunye nokuvala izixhobo zokupompa inkqubo okanye ezinye iinkqubo zombhobho woxinzelelo oluphezulu noluphakathi ezingama-600 ukuya ku-1,000MW injini yomphunga. Izinto eziluncedo Umzimba wevalufa kunye nebhonethi yamkela isakhiwo soqhagamshelo oludibeneyo oluphakathi, olubonisa ukuhlengahlengiswa okufanelekileyo. Zombini iziphelo zamkela uxhumano oludibeneyo. Idiskhi yevalve ...
Iinkcukacha Uhlobo loLawulo lweModeli yeValve T964Y-420 T, T964Y-500Ⅰ, T964Y-2500LB Igama lesilinganiselo Ububanzi DN 250-300 Isetyenziselwa ukulawulwa kwenqanaba lamanzi etanki lamanzi ukusuka kwi-600 ukuya kwi-1,000MW iyunithi ye-supercritical (ultra-supercritical) kunye nokufezekisa injongo yokulawula inqanaba lamanzi letanki lamanzi ngeendawo ezahlukeneyo zokuvula. Izinto eziluncedo Umzimba wevalve uyayamkela into eyenziweyo ngokubanzi ngamandla aphezulu kwaye ivelufa yamkela uhlobo lwesixhobo sokuntywila ngokuhamba kakuhle ...
Ukucoca ivalve yenkqubo yomphunga-wamanzi
Iinkcukacha Uhlobo lweDrain Valve Model PJ661Y-500 (I) V, PJ661Y-630 V, PJ661Y-P54290 (I) V, PJ661Y-P61310 V Igama lobubanzi begama DN 40-100 Imveliso isetyenziselwa inkqubo yomphunga wamanzi kwibhoyila okanye iiturbine zomphunga. yeyunithi yamandla obushushu e-thermal (super-supercritical). Izinto eziluncedo Umzimba wevalufa usebenzisa ulwakhiwo olwenziweyo ngokubanzi. Uhlobo lokutywina lomzimba wevalve kunye nebhonethi yamkela uxinzelelo lokutywina. Ukutywina umphezulu wesitulo sevelufa kune-satellite 6 alloy ...
I-Hydraulic-way-valve yeendlela ezintathu yokuhambisa amanzi ngesifudumezi soxinzelelo oluphezulu
Iinkcukacha Uhlobo lwe-Three-way Valve Model F763Y-2500LB, F763Y-320, F763Y-420 Ububanzi begama le-DN 350-650 Ngexesha eliqhelekileyo lesifudumezi soxinzelelo oluphezulu lwe-600 ukuya kwi-1,000MW iyunithi yamandla obushushu (eyokugweba kakhulu), eyona ndlela yevalve yendlela ezintathu kwindawo yoxinzelelo oluphezulu lwe-heater yokuvula kwaye ukugqitha kuvaliwe. Ukunikezelwa kwamanzi kwibhoyila kungena kwisifudumezi soxinzelelo oluphezulu ukusuka kwindlela ephambili ngaphambi kokungena kwibhoyila ngevalve yendlela ezintathu ...